Dhagayso:- Beelaha Gabooye oo Daaha ka rogay Sirta ku qarsoon goosashada Somliland | Saadaal Media	Friday, March 7th, 2014	Home
Dhagayso:- Beelaha Gabooye oo Daaha ka rogay Sirta ku qarsoon goosashada Somliland
May 5, 2013 - 9 Jawaabood	ShareIyadoo la abaabulayo shir looga hadlayo midaynta Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland ayaa hadana waxaa soo baxaya sirta ku hoos duugan goosashada Maamulka Somaliland, iyo lacagihii faraha badnaa ee uu bixiyay Maamulkii KMG ahaa ee xiligaasi Madaxda u ka ahaa Cali Mahdi Maxamed.
Somaliland ayaa lagu aas aasay shirar ka dhacay Magaalooyinka Boorame iyo burco muda haatan laga joogo dhowr iyo Labaatan sano.
Hadaba Suldaan Cayduruus Maxamed Cabdi (Afsagaaro) oo ah Guddoomiyaha Ururka USR ee beelaha Gabooyaha Soomaaliyeed, isla markaana ka tirsan Salaadiinta Soomaaliyeed, deegaan ahaana kasoo jeeda Waqooyiga Soomaaliya ayaa waxaa uu goob joog ka ahaa dhacdadaas iyo shirkii Burco waxaana uu suldaanka ka hadlayaa sida xiligaasi wax u dhaceen iyo waxyaabihii keenay in Somaliland ay tiraahdo waan ka go’aynaa Soomaaliya inteeda kale.
Suldaanka ayaa sheegay in shirarkii ka dhacay Magaalooyinka Burco iyo Boorame ay lacagtii ku baxday bixisay Dowladdii Cali Mahdi, isagoona suldaanku daaha ka rogay sir badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ka qarsoonayd.
Suldaanka ayaa ku bilaabaya hadalkiisa Sida Muqidsho looga raray Lacagtii lagu dhisay Somaliland.
Janaay cabdale says:	May 5, 2013 at 12:32 pm	Marna kii carab saalax marna kii gabooye taasi waxey na tusin dalkii in uu nabad noqday,,,, Carab saalax ama yaxye oo u doodaaya kismaanyo Maamulka Azaania, isaga waxba kama galin dadka ku baaba’aya dagaalka iyo duqaymaha xulufadiisa. Waxaa taa uga muhimsan inay hirgaliyaan hanka ay higsanayaan ee huwan heeryada halaagga. Kenya wali waxay waddaa xadgudubyadeedii joogtada ahaa, qiilku wali waa sidii, argagixiso la dirir, hadda wayba sharciyeysan tahay, oo waxay ka mid tahay AMISOM, ninkii AMISOM ka horyimaadana waa nadaddiid, lagu weydiin mayo maxaad uga hortimid? Maxaad ku diiddan tahay? Waa inaadan marna dhaliilin xadgudub walba oo ay sameeyaan. Madax iyo Mijo isku maran.
In ay ku daaban yihiin CUDUD SHISHEEYE.
Inay isla iyaguba yihiin HARAADI WADAAD [MAXKAMADIHII].
In ay yihiin haraadi Qabqablayaal.
mudugna diidan aduunyo
Reply »	kacaan says:	May 5, 2013 at 1:27 pm	janaay kan la baxey waa keydmedia oo weli wada hurinta colaada iyo qabyaalada gaboowdey qoraaladooda iyo fariimahoodana waa la yaqaan wiilka sacad oo moodey caydiid inuu ahaa halyeey ama u yaqaan inuu ahaa cadaaladii kaliya oo somaliya soo martey inuu yiraahdo dadbaan wacdinaya maka qaadan karnaa waa maya seey ila tahey hadii caqliga saliimka ah uu shaqeeynaayo tan kale keydmedia waa ayaka maalin walbe soo bandhiga video eey na tusayaan xasuuqii uu hawiye geeystey ayakoo dad masaakiin ah inteey qoryo ku qabtaa dhahaya dhaha waxaa la laayey siyaad bare ama morgan ama gaani waana gabood falkii iyo dhibaatadii usc dalka u geeysatey iyo dabkii eey shideen oo dami waayey mudo 22 sano ah ayeey waliba hada ku darsadeen qoraalo aan ku habooneyn waqtigaan oo somali cuqdad kusii kala abuurayo waxaana is weeydiiyaan nimaan kaan keydmedia ma shisheeyaa ku adeegta oo yiri isku dira somali walaahi waa yaab dadku horta ma yihiin niman aaqiro ineey jirto og mise waa gacan ku dhiiglayaal og inaan aaqaro waxba u jirin oo ka doorbidey ineey qabiil u adeegaan soomaaliyey idinkaan idiin daayey jawaabtaas raaskambooni iyo qabqable iyo alsheydaan iyo shisheeye midna dalkaan xal uma hayo ee iftiinkaas yarkaa hala ilaashado oo somaliya somali baa leh dowladana hala taageero qabyaaladana hala iska iloobo
Reply »	abdi says:	May 5, 2013 at 1:55 pm	janay cabdale kan watow horta magic aadan lahayn ha soo qaadan ragan aad ka hadlayso ee aad hugaamiyo kooxed ku tilmamntay waa raga keenay In kismaayo manta mamul laga dhiso ama loo hawoodo dadka aad sheegi ayka xoogayaan deegan ka xagay ku noolaayeen mise waxaad sheegi shabaab oo aad leedahay maxaa looga saaray kismaayo waad riyoonaysaa ee hurdada ka kac
Reply »	daadir says:	May 5, 2013 at 2:48 pm	abdi@ adiga miyaa magaca leh kkkkkkkk hadana magaca miyaa ku haystaa ibtalo waa tan oo kale
Reply »	Shujaac says:	May 5, 2013 at 7:47 pm	To janaay ..
Dadka waa dulooboo garan waaye danahoode.
.nin daaskiisa soo gubay walina doodaaya.
.oo dacwadiisu kor latahay danina moodaaya.
Waagoo dilaaco iyo gabal sii dumaayaba
ninka shidaya dogobka naareed danbaska faarfaari.
Dadkiisii ninkaas gubahayoo dayni kari hayni…
Diin laawayaashaa miyaa daris lagalid mudan
.walaalnimo ninkii diidayoo duurka ka istaagay.
.danbiilaha dadkii wada laqoo dul ku dhiig laha a.h:.
In laka digtoonaada oo dibada laka joogo.
Oo daaskaaka aad kadhisataa miyay dani huraynin.
Dabaal baana garanayn daraad gubtoonkiise.
Ragga deginkoodi nuurinahayee daqar xun gaarsiini..
Doqonoow adaa taadi gabay dayaacay naaftaadiiye..
Dib ulaab bal maankaada oo daadi xaqiiqdaada.
Oo dadkaakaa banaan warane daah usoo xiro bal
.dabadeed imow dowga oo dacwada soo dayso.
Ama duurka naka joog ninyahow dooda waanacaye
.ama garo dantaadoogoofki dac ka dhowro
Reply »	taagane says:	May 5, 2013 at 10:00 pm	Janaay cabdala .nacalaa adiga iyo qabxadii ku dhashay iyo meeshii la gaakeenay kuyaal baastar baastar dhalay.waan ku aqaanaa walaashaana waa tii wacelada dhashay ee lagu inkiray ee ku dhashay labada gabdhood eemataamaha ah.marka waxaa fiicnaan laheyd inta aad qabiil caayi laheyd in aad walaashaa usheegtid in ay lugaha isku qabsato.
Reply »	Cabdi Kismaayo says:	May 5, 2013 at 10:34 pm	Taagane, walaal cayda ma fiicnee ha caytamin. Janaa Cabdalle kan sheeganaya waxaa laga yaabaa mid rabo in uu fitan ka dhexabuuro shacabka Jubboyinka oo uu yahay nin reerka Madaxweeynaha ah. Beesha Sade waa la yaqaanaa meesha aay degaan, salaadiintoodana maanta kismaayo ayeey joogaan oo waxay raacsan yihiin Jubbaland. Ma raacsana kan RW sheeganaya oo xitaa raali ka ah in Gedo lagu daro Bay iyo Bakool. Raskambooni waa dad sharaf leh oo dhiig badan u daadiyay in gobolkan laga xoreeyo argagaxiso iyo warlords. Allah ajar hasiyo Sheikh Axmed Madoobe iyo Ciidamadii u dhisay Prf Gandi. Taagane, Beesha hoganka uhayso Jubbaland waa dad sharaf leh, Allah inagama qaado beesha Absame waa dad boqoro ah. Markay ugargaareen Maxaakimta Somalia ayeey rajo siyeen. Markay arkeen in Shabaab qabiil noqdeen oo uu she Sharif ka dhuuntay wax bay fahmeen. Mar dambana lama siri doono inshaAllah. Walaalahod Majeerteen Allah khayr hasiyo mar hore ayeey fahmeen ciyaarta dadkoodii way ka badbaadiyeen dhibka koonfurta la raagay. Alxamdulillah reer Jubbaland maanta kadib qof masugi doonaan. Waan celin doonaa 600,000 ee Qaxooti ee ku xaraysan xarooyinka qaxootiyada. Waxaan dhisi doonaa ciidan dhan 40,000 oo aay tababartay Kambooni oo sidoodoo kale salaada 5ta wakhti tukani aan qof dulmi doonin, shabaabna xilfaha uqaadi, mooryaanta Muqdisho fadhidana fadhigooda oogu tagi.
Reply »	Adam says:	May 5, 2013 at 10:41 pm	@ taagane, sxb kan wata janaay cabdale ma astaahilo in loo jawaabo,waa doqon wixii afkiisa ku soo dhaca iska qoraya,dad ka nasabsan oo aanu gaari karin iska caayaya,waa dameer faras ka faanaya camal,
Reply »	taagane says:	May 6, 2013 at 12:51 am	Abdi kismaanyo.salan kadib.waa runtaa inla caytamo waa ceeb.ceebta waxaa ukeentay walaashiis janaay cabdala.hadala ooma banaano
Latest News	Xaflad lagu Caleema saarayo Madaxweynaha Koonfur Galbeed Madoobe Nuunow oo kasocota Baydhabo
Dhagayso:- Haween Ciidamada Dowlada Katirsana oo la Ruqsiyeey oo Banaanbax Muqdisho ku dhigay
- Mar 6, 2014	in kabadan boqol haween ah oo ka tirsanaa ciidmada milatariga oo dhawaan la shaciyey ...